Ogaden News Agency (ONA) – Dagaalka Dhanka Internet ka Ah ee Ruushka & Maraykanka.
Dagaalka Dhanka Internet ka Ah ee Ruushka & Maraykanka.
Posted by ONA Admin	/ October 12, 2017
Basaasiinta Yuhuuda ayaa eegay budhcada internet-ka ee Ruushka u dhalatay oo adeegsanaya Software-ka Kaspersky, laba sano ka hor, sida ay ku warrameen warbaahinta Mareykanka.
Waxaa Ruushka lagu eedeeyay in uu doonayay in uu dhaco sirta Mareykanka, sida ay qoreen wargeysyada New York Times iyo Washington Post. Sirdoonka Yuhuuda ayaa arrinta ogaaday markii software-ka ay u adeegsadeen in ay ku dabagalaan budhacada.
Kaspersky ayaa beenisay eeda loo jeediyay, waxayna sheegtay shirkadda in aysan ka warhayn arrintaas, aysanna la shaqeynin maamulka Ruushka. Bishii la soo dhaafay, dowladda Mareykanka ayaa dalkeeda ka mamnuucday adeegsiga software-ka lagula dagaallamo fayraska.
Israa’iil ayaa tilmaamtay in ay Mareykanka ku wargelisay dhacdada, taa oo sababtay in Mareykanka laga mamnuuco shirkadda. Wargeyska New York Times ayaa sheegay in “dad badan lagu wargeliyay duullaanka internet-ka ee Ruushka”.
Warqado la kala soocay ayaa la sheegay in lagala baxay kumbuutarada shaqaalaha laanta amniga gudaha Mareykanka ee NSA kuwaas oo adeegsanayay Kaspersky. Laanta NSA, Aqalka Cad iyo safaaradda Israa’iil ee Washington ka maysan hadlin dhacdada.
Wargeyska New York Times wuxuu sheegay in safaaradda Ruushka aysan ka jawaabin dalabka warbaahinta ee ah in ay eeda ka hadlaan. Shirkadda Kaspersky ayaa daabacday qoraal ay ku sheegtay in aysan weerarkaa ku lug lahayn, aysanna waxba ka ogeyn xaaladda.
Shirkaddan ayaa tilmaamtay in aysan weligeed caawin, aysanna caawin doonin dowlad kasta oo dooneysa xadgudub dhanka internet-ka ah.